16 ပတ်သားကလေး - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » ကလေးငယ်ပထမနှစ် » 16 ပတ်သားကလေး
ကလေးကို မှောက်ထားလျှင် သင့်ကလေးသည် ခေါင်းထောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပြီး သူ့လက်မောင်းများကို အသုံးပြု၍ ပခုံးကို ထောင်နိုင်သည်။ ထိုသို့ တစ်ဝက်ထောင်ထခြင်းသည် သူမ၏ ကြွက်သားများကို သန်မာစေပြီး ဘာဖြစ်နေသည်ကို သိရှိရန်သူပိုမြင်ရစေသည်။ မှောက်လျက်မှ ပက်လက်သို့ ပုံစံပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် သင့်ကို အံ့အားသင့်စေလိမ့်မည်။ သူမနှင့် အတူဆော့ကစားခြင်းဖြင့် ထိုသို့ တစ်ပတ်လိမ့်ခြင်းကို လေ့ကျင့်ပေးနိုင်သည်။ အရုပ်ကို ကလေး၏ ဘေးတွင် ချပေးခြင်းဖြင့် သူမကို စိတ်ဝင်စားစေလျှင် အရုပ်ကို လှမ်းယူဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မည်။
သူမ၏ အားထုတ်မှုကို ချီးကျူးပါ။ ပြုံးပြပါ။ ထိုကိစ္စသည် အနည်းငယ် အားထုတ်ရသည့်အတွက် သင်၏ ထောက်ခံမှုကို သူမလိုအပ်ပါသည်။
တတိယလ၏ နောက်ဆုံးအပတ်တွင် ကလေးသည်-
• မတ်မတ်ချီထားလျှင် ခြေထောက်ကို အားပြုထောက်နေပြီဖြစ်သည်။
• အရာဝတ္ထုတွေကို ဆုပ်ကိုင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
• ဆွဲပြီး ထိုင်ခိုင်းလျှင် ကိုယ်ခန္ဓာကို ထိန်းထားနိုင်သည်။
• အသံလာရာသို့ အထုးသဖြင့် အမေ၏ အသံကို အာရုံစိုက်နိုင်သည်။
• အသံတွဲ တွေကို ထွက်နိုင်သည်။
• သင့်ကလေးကို လှဲလျက်ချထားသောအခါ လက်များကို အားပြု၍ ခေါင်းနှင့် ပခုံးကို ထောင်မတ်ရန်ကြိုးစားသည်။
ကျွနု်ပ်၏ ကလေးကို မည်သို့ ကူညီပေးသင့်ပါလဲ။
သင့်ကလေးကို သူလှည့်နေကျဘက်ကို ကိုယ်ကို ဖြည်းဖြည်းတွန်းပေးခြင်းဖြင့် သူလှိမ့်နိုင်ရန် အားပေးကူညီနိုင်သည်။ သူ့ကြိုးစားမှုကို ချီးကျူးပါ။ ပြုံးပြပါ။ တစ်ခါတရံ သင့်ကလေးငယ်သည် စွမ်းရည်အသစ်ကို သင်ယူသည့်အခါ အနည်းငယ် စိုးရွံ့ပြီး ရှက်နေနိုင်သည့် အတွက် သူ့ကို အားပေးသင့်သည်။
ဆရာဝန်တိုင်းမှာ ကလေးငယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးကို စစ်ဆေးဖို့ သူ့နည်းလမ်းနဲ့သူ ရှိကြပါတယ်။ စစ်ဆေးမှုတွေဟာ ကလေးရဲ့ လိုအပ်ချက်ပေါ်လည်း မူတည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးကို စစ်ဆေးပြီးလျှင် ဘာကျန်းမာရေးပြဿနာရှိလဲဆိုတာကို ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးပါ။ သင့်ဆရာဝန်မှ –
• သင့်ကလေး၏ ကိုယ်အလေးချိန်၊ အရပ်၊ခေါင်းလုံးပတ် နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို တိုင်းတာနိုင်ပါသည်။
• ခန္ဓာကိုယ်ကုို စစ်ဆေးခြင်း၊ ယခင်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကို စစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။
• သင့်ကလေးကို အစားကျွေးခြင်း၊ အိပ်ခြင်း၊ ကြီးထွားခြင်းနှင့် ဘေးကင်းမှုတို့အတွက် သင့်ကုို ညွှန်ကြားပြသပေးနိုင်သည်။
• သင့်ကလေးကို ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးသည့်အခါ ဖြစ်တတ်သော တုံ့ပြန်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိလိုသည်များကို ဖြေပေးနိုင်သည်။
တစ်လအတွင်းဖြစ်ခဲ့သော ကလေးနှင့်ပတ်သက်သော ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အစာကျွေးခြင်း၊ နို့တိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် မိသားစုထဲက အပြောင်းအလဲများကို သင်အာရုံထားသင့်ပါသည်။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့် အချက်အလက်များကို ကောင်းစွာမှတ်သားထိန်းသိမ်းထားပါ။ ကလေး၏ ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းတွင် လိုအပ်သော အချက်အလက်များအားလုံး (ကလေး၏ အလေးချိန်၊အရပ်၊ ခေါင်းပတ်အတိုင်းအတာ၊မွေးရာပါ အမှတ်အသား၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၊ဖျားနာခြင်း၊ ကုသခဲ့သော ဆေးများ၊ဆေးအဖြေများ စသည်ဖြင့် ) ချရေးမှတ်သားပါ။
အာက်ပါတို့သည် သင်သိထားသင့်သော အကြောင်းအရာအချို့ဖြစ်ပါသည်။
အ၀လွန်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးတွင် အသုံးများသော အသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ လူကြီးများတွင် အ၀လွန်လျှင် ပြဿနာများရှိသော်လည်း ကလေးများဝနေလျှင်မူ သိပ်ပြဿနာမရှိနိုင်ပေ။
ဤ ပြဿနာသည် ကလေးကို မကျန်းမာသော အာဟာရ သို့မဟုတ် သင့်ကလေးသည် လှုပ်ရှားမှုနည်းသောကြောင့်ဖြစ်ရသည်မဟုတ်ဘဲ ကလေးတွင် ကြွက်သားများကောင်းစွာ မဖွံ့ဖြိုးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူကြီးပြင်းလာသည့်အခါ ထိုပြဿနာပြေလည်သွားနိုင်ပါသည်။ သင့်ကလေး ၀မည်ကို စိုးရိမ်လျှင် အသေအချာစစ်ဆေးနိုင်ရန် ဆရာဝန်ထံသို့ ခေါ်သွားပြပါ။ အ၀လွန်ခြင်းကို စစ်ဆေးနိုင်ရန် ဆရာဝန်မှ သင့်ကလေး၏ ကိုယ်အလေးချိန်နှင့် အရပ်ကို အသက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး စစ်ဆေးပါလိမ့်မည်။ သင့်ကလေးသည် ကိုယ်အလေးချိန်ပိုနေလျှင် သင့်ဆရာဝန်မှ သင့်ကလေး၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို စစ်ဆေးပါလိမ့်မည်။ ဆရာဝန်အနည်းငယ်ကသာ ယခုအရွယ်တွင် အထူးသဖြင့် အစိုင်အခဲအစားအစာများမစားရသေးခင်အချိန်တွင် ၀နေခြင်းကို အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မည်။
ကလေးအများစုသည် လေးဘက်သွားစပြုလျှင် နှင့် လမ်းလျှောက်သင်စအချိန်တွင် ကိုယ်အလေးချိန်ကျသွားတတ်သည်။ ကလေးကြီးလာလျှင် ကလေးကို ကြမ်းပေါ်တွင် ကစားရန် အားပေးကူညီနိုင်သည်။ ကလေးဗိုက်ဆာသည့်အချိန်မှ အစားကျွေးရန်လိုပြီး ထိုသို့လုပ်ခြင်းဖြင့် ကလေးကို အ၀လွန်နိုင်ချေမှ လျော့နည်းစေလိမ့်မည်။
သင့်ကလေးသည် သူ့ကို အပေါ်သို့ ပစ်မြှောက်ပြီး ပြန်ဖမ်း၍ ကစားသည်ကို အလွန်သဘောကျနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုသို့ ကစားခြင်းသည် အလွန်အန္တရာယ်များပါသည်။ အချို့ကစားနည်းမျာသည် အသက် ၂ နှစ်အောက် ကလေးများအတွက် အလွန်အန္တရာယ်များသည်။ ကလေးကို ခုန်သည့်အခါ လှုပ်ရမ်းသည့်အခါများတွင် ဒဏ်ရာရနိုင်ပါသည်။ ကလေး၏ခေါင်းသည် တစ်ကိုယ်လုံး၏ အလေးချိန်နှင့် တူတူဖြစ်သောကြောင့်၊ လည်ပင်းကြွက်သားများသည်လည်း ခေါင်းကို ကောင်းစွာထိန်းနိုင်ရန်ကောင်းကောင်းမဖွံ့ဖြိုးသေးပေ။ ခေါင်းကို ရှေ့တိုးနောက်ငင်လုပ်ခြင်းသည် ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်စေသည်။ ဦးနှောက်ထိခိုက်သည့်အခါ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်း၊ ဖိအားများခြင်း နှင့် အာရုံကြောများပျက်စီးခြင်းတို့ဖြစ်ပြီး သင့်ကလေး၏ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆို်င်ရာ ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ ကလေး၏ မျက်လုံးကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ မျက်ကြည်လွှာထိခိုက်ပါက အာရုံကြောကို လည်း ထိခိုက်စေပြီး အမြင်အာရုံကို ထိခိုက်စေသည်။ မျက်လုံးကွယ်သည့်အထိဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကလေးအချင်းချင်းဆော့ကစားသည့် အခါ လှုပ်ရမ်းမိလျှင်လည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ကြမ်းတမ်းစွာ မဆော့စေဘဲ ကလေး၏ ခေါင်းနှင့် လည်ပင်းကို လက်ဖြင့် ထိန်းထားပေးရမည်။ ထို့အပြင် ကလေးကို ချီထားသည့်အခါမျိုးတွင် ပြေးခြင်း၊ ခုန်ပေါက်ခြင်းကို ရှောင်ပါ။
အောက်ပါတို့သည် သင်စိုးရိမ်ပူပန်နေနိုင်သော အကြောင်းအရာတစ်ချို့ဖြစ်ပါသည်။
သင့်ကလေးသည် ချိုလိမ်၊ နို့ဘူး၊ ကလေးချော့တေး၊ နှင့် ကလေးရုပ်များသည် သင့်ကလေးကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည်။ ထိုအရာသည် ကလေးအတွက် အလေ့အထကဲ့သို့ဖြစ်သွားလျှင် ဖြတ်ရန်ခက်သည်။ သင့်ကလေးကို ထိုအရာများကို မစွဲလမ်းစေလိုလျှင် ထိုအရာများကို သုံးခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် ယခုအချိန်သည် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ ယခုအရွယ်သည် ကလေးကြီးများထက် အပြောင်းအလဲကို လက်ခံနိုင်သည့်အရွယ်ဖြစ်ပြီး မှတ်ဥာဏ်မှတ်နိုင်စွမ်းသည်လည်း အကန့်အသတ်ရှိနေသောကြောင့် ထိုသို့စွဲလမ်းနေမည့် အရာများကို အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်တန့်ရန်အဆင်ပြေသည်။
ထိုအရာဝတ္ထုများမရှိလျှင် ပို၍ သက်တောင့်သက်တောင့်ဖြစ်နိုင်ရန် သင့်ကလေးကို ကူညီပါ။ သင့်ကလေးသည် ထိုအရာများကို အသုံးမပြုရန်အဆင်သင့် မဖြစ်သေးသော်လည်း သုံးသည့်အချိန်ကို ကန့်သတ်ပေးခြင်းဖြင့် လေ့ကျင့်ပေးနိုင်သည်။
ပထမသုံးလသည် သင့်ကလေးအတွက် အလွန်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်သောကာလဖြစ်သည်။ သင့်ကလေးကို ဖြည့်စွက်စာကျွေးရန် အချိန်ကို ရွေးရလျှင် ယခုအချိန်ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင် ဖြည့်စွက်စာကျွေးလျင် ၆လကလေးကို ကျွေးသကဲ့သို့ ခက်ခဲမည်မဟုတ်ပေ။ သင့်ကလေးကို ဖြည့်စွက်စာစတင်ကျွေးရန် အကောင်းဆုံးမှာ ကလေးအာဟာရမှုန့် ကျွေးခြင်းသို့မဟုတ် ညှစ်ထားသော နို့ ရည်ကို နို့ဘူးထဲသို့ ထည့်တိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်ကလေးက ဘယ်အရာကို ပိုနှစ်သက်သည်ကို သိရန် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးစမ်းသုံးကြည့်နိုင်သည်။ ကလေးအာဟာရ မှုန့် ကို ကျွေးပြီး နို့တိုက်ခြင်းကို တဖြည်းဖြည်းလျှော့သွားခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
နို့မတိုက်ခင် နို့ဘူးတိုက်ရန်ကြိုးစားပါ။ သင့်ကလေးမှ ငြင်းဆန်လျှင် နောက်တစ်ကြိမ်တွင် ထပ်ကြိုးစားပါ။ သင့်ကလေးမှ ၃၀ မှ ၆၀ မီလီလီတာ လောက်ကို သောက်သည်အထိ ဆက်လက်ပြုလုပ်ပါ။ သင့်ကလေး အဆင်ပြေပြီ ဆိုလျှင် နို့တိုက်ခြင်းအစား အာဟာရမှုန့်ကို ပြောင်းလဲအစားထိုးပါ။ သင့်ကလေးမှ နို့ရည်ကို အစားထိုးနိုင်သည် အထိ တဖြည်းဖြည်းနှင့် အစားထိုးပါ။
သင်အလုပ်မှ ပြန်လာချိန် ညနေခင်းတွင် သင်နှင့် သင့်ကလေးနှစ်ယောက်လုံး သက်သာစေရန်နို့တိုက်ခြင်းကို အချိန်ကြာကြာမပြုလုပ်သင့်ပါ။ သင့်တွင် နို့ထွက်သေးသည်ဆိုလျှင် တနေ့ တစ်ကြိမ်ခန့် ဆက်တိုက်နိုင်သည်။ သင့်ကလေးကို လုံးဝ ဖြည့်စွက်စာကျွေးနိုင်သည် အထိဆက်တိုက်ပါ။ သို့မဟုတ် သင့်တွင် နို့ခမ်းလာသည်အထိ ဆက်တိုက်နိုင်ပါသည်။
ထို့နောက် ၁၇ ပတ်တွင် ကလေး မည်သို့ ဆက်လက်ကြီးထွားလာမည်နည်း။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဩဂုတျ 29, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတျ 29, 2017
Murkoff, Heidi. What to Expect, The First Year. New York: Workman Publishing Company, 2009.
Print. Page 249-288
ချိုလိမ်စုပ်ခြင်းသည် သင့်ကလေးအတွက် ကောင်းမွန်ပါသလား